तर तपाईं कहाँ जाने गर्नुपर्छ? चाहे त्यो आफ्नो पहिलो पटक वा तपाईंको दशौं छ, उपलब्ध रेल को सरासर मात्रा तनाव सक्छ, भ्रम र बाहिर हराइरहेको को कुल डर. छैन चिन्ता – किनभने हामी यहाँ भेला गर्नुभएको बाल्टिन सूची को5रेल द्वारा यात्रा गर्न सबै भन्दा राम्रो युरोपेली क्यापिटल. बस, बकसुआ अप, र सेव फ्रान्स गरेको उत्कृष्ट baguettes लागि कोठा, एक सवारी हामी जाँदै हुनुहुन्छ किनभने.
को द्वारा रोक्न louvre को मोना लिसा मा एक पिक लागि वा चाप डी ट्रायोम्फे चढाई गरेर ती glutes खेती. को राइन मा एक रात्रिभोज क्रूज आनन्द, केही फ्रान्सेली बुटीक एउटा यात्रा तिर्न, and take in the gleaming Eiffel Tower as it comes to life in the evenings.
को पाठ्यक्रम, पेरिस यसको शहर को केन्द्र भन्दा बढी छ. को sprawling महानगरबारे दुई लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई घर हो, भन्नाले तपाईं साँच्चै यो प्रस्ताव के छ को सतह scratching बिना यहाँ सप्ताह खर्च गर्न सक्छन्. को पोंट Alexandre III मा hordes देखि एक दिन यात्रा र टाउको भर्साइल्लेज लागि Getaway, जहाँ शाही महल अझै पनि 1700 का देखि यसको रिक्ति बावजुद सर्वोच्च शासनकालमै. दिन टिकट सिर्फ 20 € छन् र दरबारमा प्रवेश समावेश, उद्यान र अधिक. अझ राम्राे, रेल को महल सीधै शहर केन्द्र चलाउन, जो त्यहाँ एक समीर रही बनाउँछ. यो interconnectedness आधिकारिक रेल यात्राको लागि हाम्रो सबै भन्दा राम्रो युरोपेली क्यापिटल को पेरिस एक बनाउँछ.
एक मेरो व्यक्तिगत को मनपर्ने शहर र पेरिस देखि एक मात्र दुई घन्टा संयुक्त राज्यको राजधानी निहित: लन्डन. सबै जीवन को हिँड्छ देखि संस्कृतिका यो पग्लिने पट एक whopping नौ लाख मान्छे घर छ. spirited सोहो गर्न पश चेल्सी देखि, तपाईं आफ्नो पार्टी मा सबैका लागि गतिविधिहरु पाउनुहुन्छ. को Shard आफ्नो रात शेक्सपियर गरेको ग्लोब भन्दा शीर्षक र समाप्त अघि नवीनतम musicals को क्याच एक, लन्डन मा ऊंची टावर.
को Eurostar उच्च गतिको रेल बस दुई भन्दा बढी घण्टामा लन्डन केन्द्र पेरिस तपाईंले लिन्छ, भन्नाले तपाईं कम समय परिभ्रमण र थप समय adventuring खर्च छौँ. यसरी, हामी लन्डन रेल द्वारा यात्रा गर्ने सबै भन्दा राम्रो युरोपेली क्यापिटल अर्को हुन विचार.
पश्चिमी युरोपेली क्यापिटल देखि भिन्न, प्राग पूर्वी युरोप मा चेक गणतन्त्र को राजधानी र सबै भन्दा प्रसिद्ध मध्य यूरोपीय शहर मध्ये एक छ. संसारमा सबै भन्दा प्रसिद्ध पुस्तकालयहरु मध्ये एक घर, को Klementium, प्राग हरेक कुना यसको संस्कृति showcases. को Astronomical घडी भ्रमण, संसारमा सबैभन्दा पुरानो अपरेटिङ घडी. पुरानो टाउन स्क्वायर वरिपरि टहलने लिन, जहाँ cobblestone सडकमा र pedestrianized लेन मतलब तपाईं चिन्ता बिना भटक घण्टा खर्च गर्न सक्छन्.
युरोप एक विशाल र वैविध्यपूर्ण परिदृश्य जसको संघ कहिल्यै रेल द्वारा यात्रा गर्न भन्दा यसको सजिलो मतलब छ. आफ्नो समय यी ऐतिहासिक क्यापिटल गर्न यात्रा गर्न borderless देशहरूमा फाइदा लिन. विमानस्थलमा को टाउको दुखाइ र यसको भीडलाई र overpriced विमान खाना छोड्न र यात्रा गर्न एक रेल प्रयोग. तपाईं बोर्ड मा एक क्षेत्रीय मार्ग हप वा उच्च गतिको रेल लागि एक सानो अतिरिक्त खर्च कि, तपाईं रेल यात्रा रमाइलो छौँ, को पर्यटन र एक पूरी धेरै अधिक.
हामी तपाईंलाई हाम्रो यात्रा सुझावहरू ढाकिएको मिल्यो. अब केही रेल टिकट बुक गर्न यो समय! एक ट्रेन सेव रेल टिकट किन्न स्थान हो.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सर्वश्रेष्ठ युरोपेली क्यापिटल यात्रा रेल” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?URL = https://www.saveatrain.com/blog/european-capitals-travel-train/ اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, र तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ / यो / डी वा / गर्न ES र अधिक भाषा.
राजधानी capitals यूरोपेन्ट्रावेल europetrains eurotrip लन्डन रेल यात्रा travelfrance travelgermany travelnetherlands